Nduzi Atụmatụ Europe na Zụọnụ Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Nduzi Atụmatụ Europe na Zụọnụ Europe
Anyị kwenyesiri ike na okporo ígwè njem bụ otu kachasị mma na nke kachasị mma eco-friendly ways iji mee njem. Iji mee nke ahụ, anyị ejikwala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri na abụọ ndị ọrụ ụgbọ oloko dị iche iche iwetara gị tiketi ụgbọ ala kachasị mma na nke dị ọnụ ala n'ofe Europe. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịnye gị ọtụtụ narị nhọrọ n'ofe ụzọ ụgbọ oloko anyị.
Site na Eurostar nke dị elu ruo ụgbọ mmiri na-ehi ụra ụzọ gasị, anyị na-anọ niile anyị oge ịchọta ndị kasị mma ahịa otú ị na-adịghị. Iji mee nke ahụ, anyị ekepụtala ụzọ nduzi ụzọ esi eduzi ụgbọ oloko na-egosi ụfọdụ n'ime ụzọ ụgbọ okporo ụzọ kachasị ewu ewu anyị. Ndị a gụnyere njem si London gaa Paris, Florence na Rome, na n'ebe nile n'etiti.
Ọ bụrụ na ịhụghị ebe ị kwụ ebe a – echegbula! Anyị mmekọrịta ekwe ka anyị chọta gị tiketi na a nso nke dị iche iche ụgbọ okporo ígwè e – obodo ụzọ gasị, njikọta mba ụwa, a na-etinyekwa ihe kachasị mma na njem dị elu.
Ya mere-ahụ onwe gị ụfọdụ njem n'ike mmụọ nsọ, na mgbe ị dị njikere, gaba na peeji ọchụchọ anyị iji chọta ụgbọ oloko kacha mma na nke dị ọnụ ala gburugburu!
Pleszọ Nlere Anya Ofzọ Ourzọ Anyị Kacha Ekele:
1. Insgbọ oloko si London St Pancras International To Paris
Gbọ oloko na-esi London eburu Paris bụ otu n'ime Europe kachasị ọsọ. Ejiri Eurostar rụọ ọrụ, Inwere ike isi United Kingdom gaa France n'ime naanị elekere abụọ na nkeji iri na isii. Nke ahụ na-enye gị oge zuru ezu iji rahụ ụra, were ụgbọ oloko ma nwee ọ aụ a njem ụbọchị. Jide baguette ma wagharị na Louvre – ma ọ bụ nwee obi ụtọ n'ịdị mma niile nke Paris nwere inye.
Ndị ọpụpụ site na London St Pancras na-eme kwa oge, na ụgbọ oloko na-agba ọsọ ihe dị ka awa. Enwere ike ikwu otu ihe ahụ banyere nlọghachi site na Paris gaa London, ị ga-ahụkwa ihe eji enyere ndụ niile aka n'ụzọ ụgbọ elu ga-ejedebe.
Ọ bụrụ na ị na-anọ na Paris, you nwekwara ike ije n'ụzọ nke ọzọ, nke g’eme London na isi ututu ma oburu n’acho. Nwere ike ịga SoHo ma banye na ihe ngosi Broadway ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ naanị ihe ịga nke ọma. Nke ọ bụla, ụgbọ oloko ahụ na-enye mgbanwe dị ukwuu na oge ọpụpụ.
2. Insgbọ oloko sitere na Florence ruo Rome Termini
Abụọ nke obodo kachasị elu nke .tali, Florence na Rome nwere ọtụtụ narị mmadụ njem nleta na-adọrọ mmasị maka ụdị ndị ọbịa ọ bụla. Art buffs nwere ike na-awagharị Vatican maka mkpirikpi Ulo uka nke Sistine. Foodies nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ n'ime oke fulawa mozzarella gburugburu. Ihe ọ bụla masịrị gị, ha abuo Italian obodo bụ ebe mara mma ịnọ otu izu ma ọ bụ ise.
ọbụna ka mma, insgbọ oloko na-ejikọ Florence na Rome hiri nne ma dịkwa ọnụ. Njem a na-ewe otu awa na ọkara ma ị nwetala ego agbakwunyere na ọmarịcha obodo dị na mpụga windo gị.
3. Usoro Map: Insgbọ oloko si Rome gaa Milan
Anyị ekwuworị banyere Rome, mana Milan bụ obodo ọzọ dị ịtụnanya na Italy. Ihe dị iche na ndịda Italytali dị ka apụl dị na oroma, Milan bụ nnukwu ọgbara ọhụrụ. Mara maka ụdị ejiji dị elu na ihe omume dị elu, obodo ahụ ga-akwụsị n'oge ezumike ọ bụla nke ndị Italiantali. Ọ bụ ezie na ihu igwe adịchaghị ka mmiri Mediterranean, ị ka nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ụlọ yana ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ abụọ n'oge ọ bụla n'afọ.
Njem ahụ si Rome gaa Milan dị ogologo karịa nke Florence. Enweghị mkpa ịtụ egwu, Otú ọ dị, ọ ka bụ ọrụ aka ike awa atọ na ọkara. Naanị ihe ị ga-eme bụ inyekwu gị ohere enwe mma!
Genoa na tiketi Milan
Rome na Milan na tiketi
Bologna na Milan tiketi
Florence na Milan tiketi
4. Insgbọ oloko si Hamburg ruo Copenhagen
A ga-ezumike Europe ọ bụla, Hamburg na Copenhagen nwere ike ha agaghị abụ obodo mbụ ndị mmadụ na-echetara gị maka njem nlegharị anya. Nke ahụ bụ ihe ihere, ezie, n'ihi na obodo abụọ ahụ jupụtara n'okike na ọwa mmiri na ọwa mmiri ndị mara mma. Hamburg bụ nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na north Germany. O nwere ike bụrụ na ị nụla ya na mbụ n'ihi njikọ ya na ndị nri pụrụ iche hamburgers. fun eziokwu – a na-akpọ ndị bi na Hamburg.
Copenhagen, n'akụkụ aka nke ọzọ, bụ isi obodo Denmark. N'ịchọrọ ị gaa na ndaeyo ma ọ bụ ihu igwe nwere nsogbu, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'obodo a dị n'oké osimiri. Site na ụlọ ndị na-egbuke egbuke ruo na ogige mgbochi, isi obodo Danish nwere ihe niile banyere ya.
Traingbọ oloko n’etiti obodo abụọ ga-egbu oge. Njem were rue awa isii, yabụ kpachara anya na-eweta ntụrụndụ. Nke a na-ekwu, insgbọ oloko bu nke ugbua ma nwee otutu njem di iche iche ka inwere ike nodu ala ma zuru ike na udo.
5. Usoro Map: Insgbọ oloko si Zurich ruo Bern
Ọ bụrụ na ịchọrọ ije Alps, gaghị ahụta ntọala kachasị mma iji nyochaa karịa Zurich na Bern. Ha abụọ dị na obodo Switzerland, obodo ndị a bụ otu awa na-enweghị awa via ụgbọ okporo. Ọ bụ ezie na ị matabeghị ya, Bern bụ isi obodo Switzerland, obughi obodo ndi ozo ama ama dika Geneva ma obu Zurich. Obodo a nwere ọnụ ọgụgụ ihe karịrị otu nde mmadụ ma juputara na ịma mma.
Ka ọ dịgodị, A maara Zurich maka ụlọ akụ ya – agbanyeghị ị ga-abanye onwe gị site na ebe mmiri siri pụta kama ụlọ ya. Emebiela obodo a kpamkpam 2,000 afọ ma mejupụtara ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ narị puku ise.
Ọpụpụ ụgbọ oloko na-agakarị ma rụọ ya, Agbanyeghị na ị gaghị enwe oge buru ibu iji kpaa maka nke a site na njem dị mkpirikpi. Jikọọ na WiFi n'efu, chọgharịa ntakịrị, ma emechaa – ụzọ zuru oke iji mee njem!
Geneva To Bern tiketi
Interlaken To Bern tiketi
Mụ na ndị mmekọ dị ukwuu gafere ọtụtụ Europe, re ga-achọ ụzọ ọ bụla masịrị gị. Ma ị na-achọ nhọrọ mpaghara ma ọ bụ na-eme njem transcontinental nke ndụ gị, na-arapara n'ahụ Save A Train iji chọta nhọrọ tiketi kacha mma dị na ọnụahịa kachasị mma.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Nduzi Atụmatụ Europe na Zụọnụ Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-route-maps-guide/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)